Adeegsiga Foomamka WordPress iyo Cuf-isjiidadka si loo soo qabto Hogaanka | Martech Zone
isticmaalka WordPress maaddaama nidaamkaaga maaraynta maaddada uu yahay mid aad u caadi ah maalmahan. Qaar badan oo ka mid ah bogaggan ayaa qurux badan laakiin waxay la'yihiin istiraatiijiyad kasta oo lagu qabsado hoggaamiyeyaasha suuq geynta. Shirkaduhu waxay daabacaan wargeysyada, daraasadaha kiisaska, waxayna u adeegsadaan kiisaska si faahfaahsan iyaga oo aan weligood qabsanin macluumaadka lagala xiriirayo dadka soo dejiya.
Sameynta degel websaydha la soo dejin karo oo lagu heli karo foomamka diiwaangelinta ayaa ah istaraatiijiyad suuq geyn wanaagsan. Adoo qabanaya macluumaadka xiriirka ama laga yaabee xitaa xulashada xiriirka isgaarsiinta emaylka ee socda - waxaad ogeysiineysaa isticmaaleha in laga yaabo in lala soo xiriiro iyadoo lala xiriirinayo macluumaadka xiriirkooda.
Haddii aadan isticmaaleyn WordPress, waxaad dooneysaa inaad ku isticmaasho foomamka meelo badan ama goobo badan, ama aad leedahay baahiyo aad u horumarsan, taladaydu marwalba waa Qalabaynta. Way fududahay in la isticmaalo, dejiyo, oo la dhexgeliyo iyada oo aan loo eegin bartaada. Haddii aad isticmaaleyso WordPress, Foomamka cuf waxay samaysay qalab aad loo jecel yahay oo si fiican ugu shaqeeya soo qabashada xogta.
Foomamka cuf-isjiidjiidku waa soojiidasho iyo hoos u dhigis foomka qaab foomam ah oo si gaar ah loogu sameeyay WordPress. Si fiican ayaa loo horumariyay, wuxuu leeyahay tan oo kudar ah iyo isku-dhafid, iyo - ugu fiican dhammaan - waxay keydineysaa soo gudbin kasta oo ka mid ah WordPress. Qaar badan oo ka mid ah qalabka foomamka kale ee halkaa yaal ayaa kaliya ku riixaya xogta cinwaanka emaylka ama bogga dibedda. Haddii ay jirto arrin ku saabsan gudbinta xogtaas, ma lihid nooc kayd ah.
Noocyada Foomamka Cuf-jiidashada ayaa ku jira
Si Fudud Loo Isticmaalo, Foomamka Awood Leh - Si dhakhso leh u dhis oo u qaabee foomamkaaga WordPress adoo adeegsanaya tifaftiraha foomka muuqaalka ee dareenka leh. Xulo beerahaaga, u diyaari ikhtiyaarradaada, oo si fudud ugu dheji foomamka boggaaga ku shaqeeya WordPress adoo adeegsanaya qalabka la dhisay.
30+ Diyaar u ah Isticmaalka Goobaha Foomka - Foomamka Cuf-isjiidadku wuxuu u keenayaa fara-gelinta noocyo badan oo foomka ah farahaaga oo aad na aaminaysaa, farahaaga ayaa ku mahadin doona. Xullo oo dooro meelaha aad rabto inaad isticmaasho adoo adeegsanaya qaabka tafatirka fudud.
Xaalad Xaalad ah - Logic Condition wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaabeyso foomkaaga si aad u muujiso ama u qariso meelaha, qaybaha, bogagga, ama xitaa badhanka gudbinta ee ku saleysan xulashada isticmaalaha. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud u xakamayso macluumaadka isticmaalahaaga la waydiiyo inuu ku bixiyo boggaaga WordPress ku shaqeeya oo aad u qaabeysid foomka si gaar ah baahidooda.
email Notifications - Iskuday inaad ku sii hayso kor dhamaan hogaamiyaasha ka soo baxa bartaada? Foomamka Cuf-isjiidadku wuxuu leeyahay emayl-jawaab-celiyeyaasha si ay kuugu wargeliyaan markasta oo foom la soo gudbiyo.
Fayl soo rar - Ma u baahan tahay in dadka isticmaala kuu soo gudbiyaan dukumiintiyada? Sawirro? Taasi waa fududahay. Kaliya ku dar faylasha faylasha galka foomkaaga oo ku keydi faylasha faylkaaga.
Keydso oo Sii wad - Marka waxaad diyaarsatay foom faafaahin ah waxayna qaadan kartaa waqti in la buuxiyo. Foomamka Cufis-jireed, waxaad u oggolaan kartaa isticmaaleyaashaada inay keydiyaan foom qayb ahaan dhammaystiran oo goor dambe ku soo noqdaan si ay u dhammaystiraan.
Xisaabinta - Foomamka Cuf-isjiidadku ma aha nooca loo yaqaan "plugin" foomkaaga maalinlaha ah… sidoo kale waa xisaab xisaabeed. Samee xisaabinta horumarsan iyada oo ku saleysan qiyamka goobta la soo gudbiyey oo aad ka yaabiso saaxiibbadaa.
Isdhexgalka - Mailchimp, PayPal, Stripe, Highrise, Freshbooks, Dropbox, Zapier iyo qaar kaloo badan! Ku dar foomamkaaga adeegyo iyo codsiyo kala duwan oo kala duwan.
Foomamka cuf waa waajib u ah degel kasta oo WordPress ah. Labadeenaba waxaan nahay shuraako waxaanna leenahay liisanka horumarinta nolosha oo dhan!
Soo Degso Foomamka Cuf-isjiidka
Tags: qabashada hogaamintafoomamkaFoomamka culayskamarketing inboundpluginWordPressfoomamka wordpressplugin WordPress
Oktoobar 11, 2009 at 5:19 PM
Fiidiyow aad u caawiya, Douglas. Alaabadaas sii wad.
Oktoobar 26, 2009 at 7:46 PM
Fiican fiican, fudud oo waxay ka caawisay tan 'GravityForms newbie' inay hesho qaabkeygii ugu horreeyay oo shaqeynaya. http://bit.ly/4ANvzN
Ma jeceshahay barnaamijka culus? Waxay umuuqataa inay kudareyso heer "jahwareer" (yacni badhano badan) aqristayaasha qaarkood… wayna adagtahay in la helo faallooyinka w / o it it!
Agoosto 22, 2011 saacaddu markay ahayd 7:24 PM
Foomamka Cuf-jiidashada iyo WordPress waa isku-dhaf weyn. Ma haysaa wax talo bixin ah oo ku saabsan inaad ku qariso URL-ka dhabta ah feylka soo dejinta oo aad soo bandhigto URL kale oo soo degsasho ah oo la isticmaali karo hal mar oo keliya? Wax sida bit.ly oo kale ah ma loo isticmaali karaa in lagu abuuro xiriiriye hal mar ah oo soo degsasho ah? Waxaan ka fikirayaa adeegsiga ku saabsan soo degsashada heesaha la iibsaday ama faylasha kale ee aad rabto wax yar oo ilaalin ah?
Agoosto 22, 2011 saacaddu markay ahayd 7:51 PM
Xaqiiqdii ma qarinayo URL-ka dhabta ah - waxaan ku xirayaa cinwaanka emaylka jawaabta sidaa darteed waxay u baahan tahay inay helaan cinwaan emayl sax ah. Waan hubaa, qaar ka mid ah koodhka yar, waxaad ku siin kartaa xiriir haash ah kaas oo ah cinwaanka iimaylka la siriyay - ka dib hadday riixaan, waad arki kartaa in mar horeba la soo degsaday oo aad joojiso qof kasta oo kale inuu soo dejiyo.
Agoosto 22, 2011 saacaddu markay ahayd 8:10 PM
Isha ku haynta si loo soo dejiyo iyo ka saarista ama beddelka iskuxirka ma noqon doono mid waxtar leh. Awood u lahaanshaha isticmaalka nooc gaabin URL ah ee qalab si dhakhso leh loo soo saaro loona xirayo isku xirka isla markaana loola wadaago isticmaale ka shaqeyn lahaa tiro jeer horay loo qeexay waxay noqoneysaa isugeyn aad u wanaagsan.
Agoosto 22, 2011 saacaddu markay ahayd 8:37 PM
Waxaad si sax ah u dhahday wixii aan sameeyay. Taasi waa qaybta 'oo leh koodh yar'.
Apr 30, 2013 at 7: 14 AM
kudar maareeyaha feylka oo abuuri aagag soo dejisan oo fudud - no more url
Qofna ma adeegsado foomamka cuf isjiidadka + isku-darka qiiqa 'chimp' oo ay ku jiraan sanduuq u eg popup / popover si uu u qabsado cinwaanada emaylka ee joornaalada Waxaan ogaaday in boggan runti uu adeegsado faleebo oo uu raadinayo hab lagu helo muuqaal u eg faleebo oo aan kharash kujirin.
Waxaan isticmaalnaa Foomamka Cufis-jireedka waana hirgelinay Mailchimp laakiin ma arag waxa aad raadineyso. Waan ku raacsanahay - way fiicnaan laheyd inaan helo qalab fudud! OptinMonster ma aha mid aad u xun oo si heer sare ah loo qaabeyn karo.